Kungani kubanda ngobusuku obucwathile? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lokhu yinto abalandeli be-astronomy abazokwazi kahle futhi bazobe bekuqaphelile. Eqinisweni, isebenza kunoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ubusuku obucwathile kuvame ukuhambisana nokwehla kwamazinga okushisa. Ngokuphikisana nalokho okungenzeka kusukela ngehora lokuqala losuku, uma sinesembozo samafu sizoba nendawo ebandayo kunangesikhathi lapho kungekho simbozo sefu, sizoba nokushisa okwengeziwe.
Njengoba imisebe yelanga incipha izolo kusihlwa, ize ingabe isafika, nemisebe ye-infrared iyaphela. Uma sine- isibhakabhaka esinamafu, imisebe ibhajweKunzima ukuthi aphume futhi nakho ukushisa. Ngokuphambene nalokho, ukungabikho kwamafu, kubangela ukusakazeka kwalokhu ukushisa nemisebe, futhi ingenaso isithiyo esingasigcina, kushiya ubusuku obubandayo futhi ngasikhathi sinye isibhakabhaka sicace bha futhi sigcwele izinkanyezi.
Lo mkhuba emini nasogwadule
Ngokufanayo, Emini, ukwakheka kwamafu kuvimbela imisebe ekungeneni ezingeni lomhlabathi. Lapho "zishayisana" namafu, zehluleka ukuzidlulisa zonke. Lokhu kubizwa nangokuthi i-refraction, ngoba ukuqondiswa kwemisebe kuyashintsha ngokudlula endaweni ehlukile kunaleyo evela kuyo. Kungabizwa ngokuthi yi-reflex, uma kuthi lapho ishayisa ishaye futhi ishintshe indlela. Ngokungazingenisi, lokhu kushoda kwemisebe kwehlisa izinga lokushisa emini. Uma ebusuku lokho kulahleka kwesibhakabhaka kulahleka, ukwehla kwamazinga okushisa kubonakala kakhulu.
Isibonelo, ngokuphambene sasikubona ehlobo. Usuku olubalele kakhulu, nokushisa okukhulu, nobusuku obuhambisana namafu, kubangela ukuthi ukushisa obekugcinwe kungaze kuphele. Ngakho-ke sinobunye balabo busuku obunzima lapho ukulala kuba yindida impela. Leyo umphumela ophindwe kabili wamafu kuma-thermometer ngokuya ngesikhathi esikuso. Amafu emini ayabanda, ebusuku kuwukushisa, ukungabikho kwawo emini ukushisa, nasebusuku kubanda.
Kungakho futhi amazinga okushisa aphezulu ehlane emini, nalezo zinsuku ezibandayo. Njengoba cishe kungakaze kube khona amafu, ikhiqiza lokho kuqhathanisa okuphezulu kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Kungani kubanda ngobusuku obucwathile?